बाराक ओबामाको कारको १० विशेषता - inaruwaonline.com
बाराक ओबामाको कारको १० विशेषता
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १८, २०७२ समय: १८:४७:२५
बाराक ओबामा केहि महिना भित्र भारत आउदै छन् । उनको सुरक्षाको विषयमा अहिले भारतीय सुरक्षा एजेन्सी तथा सीआईएको टाउको दुखाइको बिषय वनेको छ ।ओबामा भारत भ्रमणमा आउदा अमेरीकाबाट नै आफू सवार हुने गाडी ल्याउन लागेका छन् । आखिर किन उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार चढ्न मानेनन् ?
आखिर के छ ओबामाको कारमा ?
बाराक ओबामाको कारको झ्यालको सिसाको ग्लास ५, ६ इन्च बाक्लो तथा बमले पनि हानि नपुग्ने खालको छ । उनको त्यो ग्लास खोल्न मिल्दैन ड्राइभरको झ्याल मात्र खोल्न मिल्दछ । जुन २.७५ इन्चमात्र खुल्छ । जसको सहायतामा उसले बाहिर रहेको सिक्रेट एजेन्ट संग बात गर्न सकुन् ।
आठ इन्च मोटा ढोकाको तौल बोइङ जहाज ७५७ को ढोका बरावरको छ । यो ढोका स्टीलको यस्तो पाताले बनेको छ जसका कारण यो गाडी बुलेट प्रुफ छ ।
कारमा जहाँ ओवामा वस्छन् त्यहा अतिथि सहित ४ जना बस्न सक्ने व्यवस्था छ । जहाँ सिसाको पार्टेसन गरिएको छ । यदि कुनै खतरा भएमा उनले एक बटन दवाएमा सुरक्षा अधिकारी संग कुरा गर्न सक्ने छन् । उक्त गाडीमा वाईफाइको व्यवस्था गरिएको छ । उनले आवस्यक परे कारबाट पेन्टागन तथा उपराष्ट्रपति संग सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कार यस्तो प्रकारले बनाईएको छ । जहाँ कुनै आक्रमण भएमा कार पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहने छ । कुनै बैकको लकर जस्तै यस कारमा कुनै क्षति हुने छैन । यदि कुनै खतराको संकेत मिलेमा कार आफै सिल हुने गर्दछ र ओवामा सुरक्षित रहन सक्ने छन् ।
५. कार चालक
ओवामाका ड्राइभर कुनै साधारण किसिमका ड्राइभर होइनन् । उनी सीआईए एजेन्ट समेत हुन् । जसलाई दोडको दौरान आउन सक्ने खतरा तथा परिस्थिति बारे खास ट्रनिङन दिइएको छ । कारमा आउन सक्ने मेकानिकल समस्याका बारेमा समेत ओवामाका ड्राइभर पूर्णरुपमा जानकार छन् ।
ओवामाको गाडीमा खास किसिमले बनाइउको तेल ट्याङकिको प्रयोग गरिएको छ । जुन गोलिबाट पनि कुनै प्रभाव पर्न जादैन । तेल भर्दा खास किसिमको प्रबिधिबाट भर्ने गरिन्छ । जसमा आगोलागे पनि कार बिष्फोट भने हुदैन ।
७. प्रतिरक्षा प्रणाली
ओवामाको कारमा यस्तो किसिमको प्रबिधि तथा उपकरणहरुको प्रयोग गरिएको छ कि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ओवामा सुरक्षित हुनसक्ने छन् । उनको कारमा नाइट भिजन क्यामेरा, अश्रु ग्यास लगायतका सामाग्री सधै उनको कारमा राखिन्छन् ।त्यसै गरि यदि कुनै हमलाबाट ओवामा घाइते भएका उपचारका लागि चाहिने सामाग्रिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उनको कारमा अक्सिजन तथा ओवामाको व्लड ग्रुपको रगत सधै तयार अवस्थामा राखिएको हुन्छ ।
आक्रमणकारीले टायरलाइृ लक्षित गर्न सक्छन् भन्ने हिसावले समेत ओवामाको कारको टायरलाइृ मजवुत बनाइएको छ । जुन टायर कुनै किसिमका गोलीले क्षति नपुग्ने खालको वनाईएको छ ।साथै पन्चर लगायतका समस्या समेत उक्त टायरमा पर्दैन । यदि परेको खण्डमा पनि कुदिरहेको कारको बिना रोकाबट फ्याट रन टेक्नोलोजि अनुसार स्टील रिमको वदल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जस्तो सुकै भारीको पनि सहन सक्ने चेसिको व्यवस्था ओवामाको कारमा गरिएको छ जसलाई अमेरिकन सिक्रेट सर्बिसले बीस्ट भन्ने गरेका छन् । चेसिसको निर्माण्मा सम्पूर्ण आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गरिैको छ । ट्रक जस्तै वजन सहन गर्न सक्ने चेसिसले जस्तो सुकै बम बिष्फोटको पनि प्रतिरक्षा गर्न सक्छ ।
१०. कारको बाहिरी बनावट
कारको बाहिरी वनाबट यस्तो किसिमको बनाइएको छ जसलाई ढुङगा देखि गोलिले पनि कुनै असर गर्दैन । जस्तो सुकै आक्रमण भएपनि त्यसले भित्र कुनै असर गर्दैन । यो कार एल्मुनियम, टाईटेनियम तथा सेरामिकको प्रयोग गरिवनाइएको छ ।
मोदीको कारमा तथा ओवामाको कारमा भन्दा एक चिजको कमी छ ।
प्रधानमन्त्री बने पछि नरेन्द्र मोदिले बीएमडव्लु ७५० मोडेललााई आफ्नो आधिकारीक कार वनाएका छन् । यसमा पनि ओवमाको कार जस्तै उपकरण तथा प्रबिधि रहेको छ । तर त्यसमा सूचनाको बिषय भने ओवामाको कारमा भन्दा कम छ ।
तसर्थ अमेरिकाको खुफिया एजेन्ट ओवामा आफ्नै कार चढुन् भन्ने चाहान्छन् । जहाँबाट उनले ह्वाइट हाउस तथा पेन्टागन सँग सधै सम्पर्कमा रहन सक्छन् । र त्यो अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामालाई अत्यन्त आबश्यक पनि छ ।